San Andres မော်ကွန်းတိုက် - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
Las Teresitas ကမ်းခြေအနီးတိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: San Andres, Tenerife ရှိကျယ်ဝန်းသောတိုက်ခန်း မြို့၏တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်ကျော်ကြားသော Las Teresitas ကမ်းခြေမှ ၁ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ သမုဒ္ဒရာ၊ တောင်တန်းများနှင့်ကမ်းခြေတစ်ခြမ်းကိုရှုခင်းများနှင့်လှပသောလသာဆောင်။ 1 အိပ်ခန်းတပ်ဆင်ဗီရိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ။ built-in ပရိဘောဂနှင့်အတူမီးဖိုချောင်။ ကားရပ်နားရန်လွယ်ကူသည်။ ပထမထပ်။
အိမ်၊ San Andres အလယ်ဗဟိုတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်
ရောင်းရန်: Sun Andres ၏အလယ်ဗဟို၊ မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းတွေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာ။ သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၁၅၀ နှင့် Las Teresitas ကမ်းခြေမှမီတာ ၃၀၀ မျှသာဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေကိုဓာတ်ပုံနှင့်ဆင်တူသည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
Las Teresitas ကမ်းခြေအနီးတိုက်ခန်း
ရောင်းရန်ရှိသည်။ မြို့တော် Santa Cruz de Tenerife မှ ၅ မိနစ်၊ San Andres ရှိတိုက်ခန်း။ Teresitas ကမ်းခြေနှင့် Anaga တောင်များကိုမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာ။ အလွန်ကောင်းသောအခြေအနေ။ ပရိဘောဂများပါ ၀ င်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရန်အဆင်သင့်ရှိပါသည်။
Teresitas ကမ်းခြေမှမီတာ ၅၀၀ အကွာတွင်ရှိသောသက်သောင့်သက်သာရှိသောအိမ်လေး !!
ရောင်းရန်: Tenerife ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေမှ ၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ Las Teresitas !! San Andres ၏ဗဟိုနှင့်အနည်းငယ်သာဝေးသောစားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ မြို့တော်ရင်ပြင်၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည်တို့နှင့်အနည်းငယ်သာကွာဝေးသောနေရာဖြစ်သည်။ အိမ်အသစ်အားလျှပ်စစ်ကြိုးကြိုးများအပါအ ၀ င်မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည် ပထမထပ် - Comun ဟင်းလင်းပြင်၊